ဗျိုင်းတအုပ် ကောင်းကင်တွင် ပျံလာသည်။ သူတို့ သည် လှည်းများကိုကျော်ပြီး သစ်တောတန်းကို ဖြတ်ပြီး သစ်ကြိမ်း၊ မဲဟော်နှင့် ဟေမန်ဘက်သို့ ရှေ့ ရှုသွားမည်။ ကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်းပင် သူတို့ သစ်တော တန်းကို ဖြတ်ကျော်သွားကြပါပြီ။ အတန်ကြာလျှင် မဲဟော်ကိုဖြတ်ပြီး သူတို့ ဟေမန်သို့ ရောက်ကြပါတော့မည်။ ချစ်သမီးစပယ်ခိုင် ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဟေမန်သို့ ရောက်ပါလိမ့်မည်။
သမီးလေးကား ဟေမန်ဝယ် နေရစ်ခဲ့လေပြီ။ ဟေမန်သူကလေးသည် ဟေမန်မှ မည်သည့်အခါတွင်မှ ခွဲခွာတော့မည်မဟုတ်။ မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကလေး၊ ပါးစုံ့ နီနီထွေးထွေးကလေးနှင့် ချစ်စဖွယ် သမီးလေး။
သမီးလေးကိုမွေးဖွားမည့်နေ့ နံနက်ခင်းက တဖက်ယပ်တဲကလေး၏ အပြင်ဘက်တွင် ကျနော်သည် အငြိမ်မနေနိုင် ဂဏာမငြိမ်နိုင်အောင် ဖြစ်နေခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်မွေးဖွားလိုက်ချိန်တွင် တဖက်ယပ် တဲကလေး၏ အခန်းတွင်းမှ ဝေ၏ညည်းသံညူသံများနှင့်အတူ ကလေး၏ “အူဝဲ” သံကိုကြားလိုက်ရလေသည်။ ဤ “အူဝဲ” သံသည်အခြားသော ကလေးငယ်များ၏ မွေးဖွားစ အော်ဟစ်လိုက်သံကလေးနှင့် မည်သို့ မျှ ထူး၍ ခြားနားခြင်းမရှိ။ သို့ သော် ထိုအော်သံကြောင့် တဲအပြင်၌ ရပ်နေသော ဖခင်လောင်းမှာ ရင်တဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။ ထိုအသံလောက်ထူးခြားသော နှစ်သက်လွန်းဖွယ်ရာသော၊ အသဲနှလုံးကို ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်ပစ်နိုင်သောအသံသည်မရှိ။ ကလေး၊ ငိုသံသည် ဖခင်ဖြစ်သူ၏ သဲခင်နှလုံး၊ အူအသဲအားလုံးတို့ ကို ဝမ်းထဲမှ ထုတ်ဖယ်ပစ်တော့သည်နှင့် တူသည်။
တဲ၏အပြင်ဘက်သို့ လက်သည်တဦး ထွက်လာသည်။သူက “အမလေးဟဲ့ လှလိုက်တာ” ဟု ပြောလိုက်သံသည် ကျနော့်သဲခင်နှလုံးတို့ ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ပဲ့ တင်ရိုက်ခတ် နေသည်။
“သမီးလေးနော်၊ သမီးလေး ”ဟု ကျနော် ရေရွတ်နေဆဲပြုံးရွှင်နေသည့် လက်သည်သည် တဲအတွင်းသို့ ပြန်၍ ဝင်သွားလေသည်။
ထိုနေ့ နံနက်ဆည်းဆာက ကျနော်တို့ ၏တဖက်ယပ်တဲကလေးမှာ အသာယာဆုံး သာယာလျက်ရှိလေသည်။ ထိုထက်သာယာစရာ၊ ထိုထက်ပို၍ လှပ ပြည့်စုံဖွယ်ရာသည် မရှိ။ သမီးရတနာ ကလေးနှင့် ဆင်ယင်လိုက်သဖြင့် အလှပဆုံး ဖြစ်နေသည်။
ယခုမူ ထိုတဲကလေးမှ ကျနော်တို့ ထွက်ခွာလာခဲ့၊ ဟေမန်ကိုပစ်ပယ်လာခဲ့၊ သမီးလေကို ဟေမန်ဝယ် ထားရစ်ခဲ့ရလေပြီ။
လှည်းပေါ်တွင် ဝေသည် အဝေးဆီသို့ ငေးမျှော် ကြည့်နေသည်.။ သူ ဘာကို မြင်တွေ့နေသလဲမသိ။ ဝေ့ မျက်လုံးများသည် ဘာကိုမျှမြင်တွေ့နေပုံလည်း မရ။ လှည်းဆောင့် လိုက်လျှင်ဝေ့ ကိုယ်လုံးကလေးမှာ အရုပ်ကလးတခုလို လှုပ်သွားသည်။ လှည်းပြန်၍ ငြိမ်သက်လျှင် သူ့ ကိုယ်ကလေးသာမက မျက်လုံး မျက်နှာအားလုံး မလှုပ်မရှက်ငြိမ်သက်နေမြဲ။ အဝေးသို့ ငေးနေမြဲ။
ကျနော်သည် သူ့ ပခုံးတဖက်ပေါ်သို့လက်လှမ်းတင်လိုက်သည်။ “သိပ်တွေးမနေပါနဲ့ ဝေ” ဟု ပြောလိုက်သည်။ သို့ သော်ဝေသည် ကျနော့် စကားများကို မကြားနိုင်။
ဝေ့ရင်ထဲမှ ပူလောင်မှုများသည် ဝေ့ပခုံး၊ ဝေ့ ပခုံးပေါ်မှ ကျနော့်လက်။ ကျနော့် လက်မှ ကျနော့်ရင်ထဲသို့ ကူးစက်နေသည် ထင်သည် ။ ကျနော်လည်း နောက်ထပ်စကား တလုံးမျှ မပြောတော့ဘဲ ထိုအတိုင်းပင် ငြိမ်သက်နေလိုက်သည်။
သမီးလေးကို ပုခက်ထဲ ထည့်လွှဲလျက် ဘေးမှ ထိုင်နေသော အခါတွင်လည်း ဝေသည် ဤကဲ့သို့ ပင် မလှုပ်မရှက် ငြိမ်သက်နေတတ်သည်။ သမီးလေးကို မျက်တောင်မခပ်ဘဲ ငေးမောငြိမ်သက်တွေဝေစွာ ကြည့်နေတတ်သည်။ ကလေးအိပ်ပျော်နေလျှင်လည်း ဝေသည် ပုခက်အနားမှ မခွာဘဲ ပုခက်အထဲ ငုံ့ကြည့်နေတတ်သည်။ ထမင်းချက်နေရင်းကပင် ထမင်းအိုးကမန်းကတန်း ငှဲ့ ခဲ့ပြီး ဝေသည် ပုခက်ရှိရာသို့ ပြန်ပြေး လာတတ်သည်။ ပုခက်အတွင်း ငုံ့ ကြည့်နေသော ဝေ့မျက်လုံးများသည် ကလေးမျက်နှာပေါ်မှ မရွှေ့ လျားတော့။ စိုက်ပြီးတွေနေသည်။ ထိုအခါ ဝေ့မျက်နှာပြင်တွင် ရယ်ခြင်း ပြုံးခြင်းလည်းမရှိတော့။ မျက်လုံးအိမ်ထဲ၌ မေတ္တာအခိုးအငွေ့ များ မှိုင်းအုံလျက်ရှိပြီး ထိုမိခင်မေတ္တာတို့ သည် ကလေးအပေါ်တွင် အထပ်ထပ်အလည်လည် ရစ်ပတ်လျက်ရှုိသည်။
‘ ဝေ လုပ်နေပုံနဲ့ တော့ ကိုယ့်သမီးကို ကိုယ်ပေးတဲ့နာမည် ဘယ်သူကမှ ခေါ်ကြတော့မှာမှုတ်ဖူး၊ ခလေးနာမည်တော့ ပျက်ပါပြီ၊ အခု စပယ်ခိုင်လို့ ခေါ်တာ ကိုယ်တယောက်ထဲရှိတော့တယ်၊ ကြည့် ခလေး အိပ်ပျော်နေပြီ၊ ပခက်နားက ခွာအုံးမှပေါ့၊ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်တာမဟုတ်ဖူး၊ အခုတော့ အိပ်ပျော်နေလဲ ခလေးကို ငုံ့ ကြည့်နေတာဘဲ‛
‘ သွားစမ်းပါ ‛
ဝေသည် နီထွေးသော မျက်နှာဖြင့် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းရယ်နေပြန်သည်။ ထိုအခါတွင် သူ့ မျက်နှာ ဝိုင်းဝိုင်းတိတိလေးမှာ ပို၍ဝိုင်းစက်သွားတတ်ပြီး မဖီးမသင်ပဲထားသော သူ့ ဆံပင်များသည် မျက်နှာပေါ်တွင်ဝဲပြီးဝေနေလျက်။ သူသည် အစွမ်းကုန်ပွင့်လိုက်သည့် ပန်းကဲ့သို့လှနေတတ်သည်။ အဟောင်းအမြေ့များနေရာ၌ အသစ်တို့ ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်လိုက်သလိုပင် သမီးလေးမွေးဖွားပြီးမှ ဝေ့အသားတို့ သည် ပို၍စိုပြေနုပျိုလာလျက်၊ သူ့ အလှသည် အတောက်ပဆုံးဖြစ်နေသည်။
“ ဒါကြောင့် ကိုယ့်သမီးလေးကို အုန်းင်္သီးလေးလို့ ခေါ်တာပေါ့လေ”
“ဒါတော့ ကိုကို ကိုယ်တိုင်ကမှ ခင်ဝေ့ကို မျောက် အုန်းသီးရထားတာလို့ ပြောတော့၊ ခလေးကို အုန်းသီးလေးလို့ သူတကာတွေ ခေါ်တော့တာ ဆန်းသလား”
ထိုအချိန်၌ သမီးလေးသည် ပုခက်ထဲမှ နိုးလာပြီး လှုပ်ရှားကန်ကျောက်လျက် မျက်လုံးနှစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်တတ်ပြီး “အယ်အယ်”နှင့် ငိုလိုက်တတ်သည်။ ကလေး၏“ အယ်အယ်” ငိုသံမှာ တဲကလေး၏ အသာယာဆုံး ဂီတတေးသံဖြစ်နေသည်။ စပယ်ခိုင်လေး၏ မျက်လုံးများမှာ တောက်ပ ရွှန်းလက် နေတတ်သည်။အနှီးစများကို လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ခြေတောက်နှင့် ကန်ကျောက်နေ၍ စပယ်ခိုင်၏မျက်နှာပေါ်မှ မဲ့နေဟန် ကလေးမှာ သနားချင့်စဖွယ် ဖြစ်နေတတ်သည်။
ထိုအခါတွင် ဝေသည် ပုခက်အတွင်းမှ ကလေးကို အသာအယာပွေ့ ယူလိုက်တတ်သည်။ မိခင်၏ စုတ်သပ် သားချော့သံမှာ မေတ္တာတရားများ လွှမ်းနေသည်။ ဝေသည်အင်္ကျီကိုမပြီး ကလေး ပါးစပ်ထဲသို့ နို့ကို ငုံ့ပြီး ထည့်ပေးနေသည်။ ဤသို့ ကလေး ငယ်သည် နို့ ကိုအငမ်းမရစို့နေဟန်၊ မိခင်၏မေတ္တာဖြင့် သီကုံးထားသောမျက်လုံးတို့ဖြင့် ကလေးငယ်အားငုံ့ကြည့်နေဟန်များမှာ လှပသော ပန်းချီကား တချပ်ဖြစ်နေသည်။
“ အမေတို့ ဆီသွားလယ်ကြအုံးစို့ဝေ၊ အမေက သူ့မြေးမလေးကို သိပ်ချစ်မှာဘဲ”
“ မရဘူး ကိုကို၊ ခလေးကိုဘယ်သူမှမချစ်ရဘူး၊ သူ့ အဖေက ချစ်တယ်ဆိုတာတောင် လွန်လွန်းနေဘီ၊ တော်ကြာ အဖွားကြီးက ခင်ဝေ့ သမီးလေးကို လက်မလွှတ်ဘဲ ထားရင်း ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ၊ရှင်းရှင်းပြောရရင် စပယ်ခိုင်နဲ့ အဖွားကြီးနဲ့ ဘာမှတော်တာ မဟုတ်ဖူးနော် ကိုကို၊ ဘာပြုလို့ လဲဆိုတော့ ခလေးက ကိုကို သမီးမဟုတ်လို့ ဘဲ၊ ကိုကို့သမီးဆိုရင် ကိုကို့လို ကျောက်ပေါက်မာပါမှာပေါ့နော် သမီး”
“အို သမီးလေးရှိနေလား၊ သမီးလေးကရီတော့ သမီးလေး မေမေက သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာဘဲ၊ ဝဝတုတ်တုတ် ကလေးနော်” ကျနော်သည် နောက်ပြောင် နေတတ်၏။ ဝေသည် မျက်စောင်းထိုးပြီး တဲကလေးအတွင်း ဂယက်ရိုက်သွားအောင် ရယ်ပစ်တတ်လေသည်။
“သိပ်ဆိုးတဲ့လူ” ဟု ဝေ၏ပြောသံမှာ ကြည်နူးစဖွယ် ဖြစ်နေတတ်သည်။
ယခုမူ ထိုရက်အပေါင်းသည် အိပ်မက်၏ အခိုးအရိပ်များသဖွယ် ပစ္စက္ခမှ ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့လေပြီ။ ချစ်စဖွယ် သမီးကလေး၏ခိုးခိုးခစ်ခစ်ရယ်သံကလေး၊ ရယ်နေလျှင် ချိုင့်နေသော ကလေး၏ပါးပေါ်မှ ပါးချိုင့်ကလေး၊ နီထွေးနေသည့် ပါးစုံ့ကလေးများ၊ သမီးလေး၏ ကန်ကျောက်နေပုံ အားလုံးတို့ သည် အိပ်မက်ဟောင်းများ၌ ပျောက်ကွယ် ကျန်ရစ်ခဲ့လေပြီ။ သမီးလေးမရှိတော့ပြီဟူသော အသိကို ယခုပစ္စက္ခ၌ ဖခင်၏ရင်ထဲတွင် လက်ခံ၍မရနိုင်သေး။.
ဝေ ငေးမောကြည့်ရှုနေသည့် လယ်ကွင်းပြင်ကြီးမှာ အဆုံးအစမရှိသော၊ လှိုင်းလေအိနေသော ပင်လယ်ကြီးနှင့် တူသည်။ လှည်း၏ နောက်ဖက် ဝေးဝေးပျပျ၌ ပန်းချီကားချပ် အနားသတ်မျဉ်းကဲ့သို့ သစ်တောတန်းကြီးကို ဝေ မြင်နေရသည်။ ဤသစ်တောတန်းကြီး၏ ဟိုဘက်၌သစ်ကြိမ်း၊ မဲဟော်ချောင်းနှင့် သမီးလေးစပယ်ခိုင်လေး နေရစ်ကျန်ရစ်ခဲ့သော တောလယ် သာခေါင်မှ ဟေမန်ရွာကလေးရှိနေသည်။
ကိုယ်တို့ သည် အတောင်ကျိုးပြတ်သော ငှက်ငယ်များအဖြစ်ဖြင့် ဟေမန်တောရိပ်၌ခိုလှုံနားနေ အိပ်စက်ခဲ့ကြ၏။ အတောင်ပြန်ကောင်းလာ၍ ဟေမန်မှ ထပျံလာသောအခါ၌ ကျေးငှက်ကလေးတကောင်သည်ဟေမန်သိုက်မြုံဝယ် ခိုလှုံ ကျန်ရစ်ခဲ့လေပြီ ဝေ။
ကျနော်သည် တင်ထားသောလက်ကို ဝေ့ပခုံးပေါ်မှ ပြန်၍ရုပ်လိုက်သည်။ ထိုအခိုက်တွင် လယ်ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးကို ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်လာသည့် လေထဲ၌ လွမ်းဘွယ် ဆွေးဘွယ်သော မိုးရနံ့၊ ရေရနံ့ ပါလာနေသည်။ ဝေ့ရင်ထဲ၌ မီး တငွေ့ငွေ့ တောက်လောင်နေသကဲ့သို့ ဝေ့မျက်နှာမှာယခုထက်တိုင်အောင် လှုပ်ရှားမှု ကင်းမဲ့နေဆဲ့ပင်။ ဝေသည် ရယ်မောရန်၊ လှုပ်ရှားရန်၊ အသက်ရှူရန်အားလုံးကို မေ့လျော့ နေသကဲ့သို့ပင်။ အနှစ်နှစ် အလလက အူတိုင်တခုလုံး ဆွေးလိုက်လာနေသော သစ်ပင်အိုကြီးနှင့်ခြားမည်မဟုတ်ပေ။
“ညနေဘက်ရထားကို ကောင်းကောင်းမှီပါတယ်ဗျာ၊ ဟိုရောက်ရင်တော့ ကျနော်တို့ ဟေမန်ကို မမေ့ကြနဲ့နော်၊ မကြာမကြာ လာလည်အုံးဗျာ၊ ဟေမန်ကို စာထည့် ဘို့တော့ ကျနော်လဲ လိပ်စာ မပေးတတ်ဘူး၊ ခင်ဗျားအပြန် နဲနဲလေးစောသွားတယ်၊ ကျနော့် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ ပြန်ဘို့ ကောင်းတာ”ဟု ကိုမြလေးက စကားစရှာပြီး ပြောနေသည်။
သူ့စကားတို့ သည် ဝေ့ နားထဲသို့ ရောက်နိုင်မည် မဟုတ်။ ဝေ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှ သမီးလေးအား သတိရနေစိတ်ကို ဟန့်တားနိုင်မည်မဟုတ်။
ကိုမြလေးသည် သူ့နွားများကို ဖြည်းဖြည်းသွားရန် ကြိုးကို ထိန်းထားနေသည်။ နောက်မှ ပစ္စည်းများ တင်လာသည့်လှည်းမှာ အဝေးတွင် ကျန်နေရစ်ခဲ့သည်။
ဟေမန်သားများထဲ၌ ခင်မင်ဘွယ်ရာ အကောင်းဆုံးလူမှာ ကိုမြလေးပင် ဖြစ်လေသည်။ သူသည် အသက် လေးဆယ်အနား ကပ်သီနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဆယ့်ငါးနှစ်ကလေးမလေး များကိုမှ ပိုးသည်။ သို့ သော် ဘယ်အခါမျှ စွံသည်ဟူ၍လည်းမရှိဘူးခဲ့။ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး အစဉ်အမြဲ ရယ်မောနေတတ်သူဖြစ်သည်။
“ဟုတ်တယ်၊ ကျနော် စောင့်တော့ စောင့်နေ အုံးမလို့ဘဲ ကိုမြလေးရေ၊ ဒါပေမယ့် စောင့်နေရင် ဆံဖြူသွားကျိုးအောင်နေရမယ့် အတူတူတော့ အခုထဲကဘဲ လက်ဖွဲ့ သွားချငိတယ်၊ တကယ်လို့ ခင်ဗျားမိန်မ မရခင် အိုပီး သေသွားမယ် ဆိုရင်လဲ အသုဘ ကူငွေလို့ သဘောထားတာပေါ့”
“ဒါတော့ ခင်ဗျား ကျနော့်ကို နှိမ်လွန်းပြီဗျာ၊ မှုတ်ဖူးလားခင်ဝေ၊ ဒီလူ ငါ့ကို အထင်သေးလွန်းနေပြီ၊ နင်တို့ လို နှပ်ချီးတွဲလောင်းနဲ့ ကောင်မလေးတွေတောင် လင်တွေ ဘာတွေရလို့ မှုတ်လား၊ အစတုန်းက ခင်ဗျာ့ဝေဟာ တာရိုးပေါ်မယ် ထမီဂွင်းသိုင်းပီး ဂွေလှိမ့်လာခဲ့တာ”
ကိုမြလေး၏ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ရယ်မော လိုက်သံနှင့်အတူ ကျနော်လည်း လိုက်ရယ်သည်။ ထိုအချိ်န်တွင် ဝေသည် နောက်ဖက်ပြန်လှည့်ကြည့် ပြုံးလိုက်ပြီး လှည်း၏ အပြင်ဘက်သို့ ပြန်လှည့်မြဲ လှည့်သွားသည်။ ထို ဝေ့အပြုံးမှာ အပြုံးမဟုတ်။ သူ့မျက်လုံးများကား ဆွေးမြေ့နေလျက်ပင်။ သူ့နှလုံးသားများကား ငိုကျွေးနေလျက်ပင်။
ဟေမန်၌ ကျနော်တို့ အားအစအရာရာကူညီသူမှာ ကိုမြလေးဖြစ်လေသည်။ သမီးလေး၏ အလောင်းကို သင်းချိုင်းသို့ ပွေ့ချီယူသွားသူမှာလည်း ကိုမြလေးပင် ဖြစ်လေသည်။
သမီးကလေးဆုံးတော့မည့်အချိန်တွင် ကျနော်သည် သမီးကို ဝေ့ရင်ခွင်ထဲ၌ပင် ထားခဲ့ပြီး တဲရှေ့ ငှက်ပျောတောဘက်သို့ ဆင်းပြေးသွားခဲ့လေသည်။ သမီးလေးကား မျက်ဖြူလန်လျက် အနှီးစ နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး သူ့မေမေ ရင်ခွင်ထဲတွင်ပင် တက်ချက်နေလေပြီ။ နေ့လယ်ဘက်က ကိုယ်ကလေးနွေးရုံမျှသာ ရှိခဲ့လျက် ညနေဘက်တွင် မယုံကြည်နိုင်ဘွယ်ရာ အခြေအနေဆိုးလာခဲ့လေသည်။
ကျနော်သည် ဆောက်တည်ရာ မရနိုင်တော့ပေ။ ရင်ထဲမှ အလုံးတခုမှာ ဆောင့်ဆောင့် တက်လာနေသည်။ ထို့ နောက်တဲဘက်မှ “ငိုလိုက်လေ ခင်ဝေ၊ ငိုလိုက် ”ဟု ပြောဆိုသံများ ကြားရသည်။ အသံများသည် ပိုမို၍ ဆူပွက်လာကြသည်။ သမီးလေး၏ သက်တမ်းမှာ လေးလမျှပင် မပြည့်သေး။
သမီးလေးကား သေဆုံးသွားလေပြီ။ ငှက်ပျောတောထဲ၌ ကျနော်သည် ထိန်း၍ မထားနိုင်တော့ဘဲ အလုံးဆောင့်တက်လာပြီး ငိုပစ်ရသည်။
သို့ သော် တဲဘက်ဆီ၌မူ ငြိမ်သက်နေသည်။ ကလေးအမေသည် ကလေးအလောင်းကို ရင်ခွင်ထဲထားပြီး စူးစိုက်ငုံ့ကြည့်နေသည်။မျက်လုံးများမှာ သမီးမျက်နှာလေးပေါ်မှ မရွေ့ လျားတော့ဘဲ ငြိမ်သက်နေသည်။ လှုပ်ရှားမှု အလျင်းမပြု။ သူ့ မျက်လုံးအိမ်ထဲ၌ မျက်ရည်များ ပြည့်သိပ် လာနေသည်ထက် ပြည့်သိပ်လာနေပြီး ဝေ သည် ကလေးအလောင်းကိုပို၍တင်းကျပ်သည်ထက် တင်းကျပ်အောင် ဖက်ထားသည်။ သူသည် တချက်ရှိုက်လိုက်ပြီး အတောင့်လိုက် တက်သွားလေသည်။
“လုပ်ကြပါအုံးဟဲ့၊ ခင်ဝေ ခင်ဝေ ဒီကောင်မလေးနှယ် ငိုလိုက်ပါလို့ ပြောလို့လဲ မရဘူး ၊ ဒါမျိူးဟာ သေတတ်တယ်။ ခြေမ လှန်ချိုး၊ မဟုတ်ဖူး တပိုးကျည်းတွင်းထဲ လက်နှိုက်ပြီင်္း လက်မနဲ့ ကုတ်လိုက်ရတယ်။ ပူတော့ပူတာပေါ့အေ၊ ဒါတော့လွန်လွန်းတယ်”
အတော်ကြာမှ ဝေသည် သတိပြန်လည်လာပြီး ဘေးမှဝိုင်း၍ဆွဲထားသည် တို့ ကို ရုန်းကန်နေပြီး ကလေးအလောင်းနား ပြေးကပ်ရန် ကြိုးစားနေသည်။ ထို့ နောက် ဝေ့ လက်ထဲသို့ ကလေး ပြန်ရောက်သွားပြန်သည်။ တင်းကျပ်စွာ မလွှတ်တမ်း ဖက်တွယ်ထားပြန်သည်။ သို့ သော် သမီးကလေး အလောင်းကို သဂြိုလ်ရန်တောင်းသောအခါ သူသည် ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပင် ပေးလိုက်လေသည်။ ဝေသည် သဂြိုလ်ရာသို့ မလိုက်။ ငိုလည်းမငိုဘဲ တဲတိုင်ကိုမှီကာ ငေးကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သမီးလေးအလောင်းကို ကိုမြလေး ပွေ့ချီပြီး ညနေ ဆည်းဆာရီတွင် သင်းချိုင်းဘက်သို့ ယူသွားသည်။ ရွာကို ဖြတ်ကျော်သွားသော ကြေးစည်သံကို ကြားရသည်မှာ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ဖြစ်နေသည်။ နေဝင်တော့မည်။ အလင်းရောင် မှိန်မှိန်ကလေးသာ ကျန်တော့သည်။
လှည်းပေါ်မှ ကိုမြလေး၏ရယ်သံ အဆုံးသတ်သွားချိန်တွင် ဝေသည် နောက်သို့ဖြည်းဖြည်း ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်လေသည်။ ဤဟေမန်သို့ အလာတွင် ဝေသည် မကျန်းမာ၍ ပ်ိန်ချုံးကျနေလျက် ယခု ဤဟေမန်မှ အပြန်တွင် ပိန်လှီနေပြန်သည်။
“ခင်ဝေ ဟေမန်က ဘယ်မှမသွားဘဲ၊ ဟေမန်မယ်ဘဲနေချင်တယ်၊ အခုတော့ ဒို့ကထွက်လာပြီး ဒို့ သမီးလေး ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီနော် ကိုကို၊ ဒို့ နဲ့ ခွဲလာရပြီနော်၊ ခင်ဝေ မလိုက်ချင်တော့ဘူး။ ဟေမန်ကို ပြန်ပြေးချင်ပြီ ကိုကို၊ အလုပ်က ပြန်လုပ်မနေပါနဲ့တော့၊ အဲဒီငွေလောက်ကို ခင်ဝေရအောင် ရှာပြပါ့မယ်”
ဝေသည် ထိုစကားတို့ ကို လေးလေးပင်ပင် ပြောလိုက်လေသည်။ ဝေသည် အမှန်ပင် ဟေမန်သို့ပင် ပြန်ပြေးချင်နေသည်။ ကျနော်လည်း အရယ်ရပ်လိုက်ပြီး ဝေ့ မျက်နှာကလေးကို ငေးကြည့်နေမိသည်။
“မဟုတ်ဖူးဝေ၊ ကို အထပ်ထပ် ပြောခဲ့ပြီးပါပကော၊ ဒို့ ဟေမန်မယ် တသက်လုံးနေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ”
ကျနော့် ပြောနေသံမှာ ညည်းညူးနေသလိုပင် ဖြစ်နေတော့သည်။
“အပြင်အလုပ်ဆိုတာ ဝင်ငွေအမှန် တသမတ်ထဲ ရှိတာမျိုးလဲမှုတ်ဖူး၊ ပြီးတော့ ကိုယ်ကလဲ ဘာမှလုပ်တတ် ကိုင်တတ်တာလဲမှုတ်ဖူး၊ နောင်ရေးနောင်တာဆိုတာ အရှည်အဝေးကြီး လှမ်းမြော်ကြည့်ပြီးမှ လုပ်သင့်တယ် အထင်ဆုံးကို လုပ်ရမယ်၊ အခု လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာကို အခု စိတ်လိုက်မာန်ပါ ကောက်လုပ်၊ အခုစိတ်လိုက်မာန်ပါ ကောက်ဖြစ်လို့မကောင်းဘူးဝေ၊ အဲဒါဆိုရင် အမှားတွေထပ်နေမှာဘဲ၊ ကြာရင် မင်းမေ့မေ့ ပျောက်ပျောက်မဖြစ်ဘဲ နေလို့ကိုမရပါဘူး၊ လူဟာအမြဲတမ်းလဲ ငိုမနေနိုင်ဘူး၊ အမြဲတမ်းလဲရယ်မနေနိုင်ပါဘူး၊ပြီးတော့အလုပ်အကိုင်တခုဆိုတာ အခုခေတ်ထဲမယ် လွယ်ကူတော့တာ မဟုတ်ဖူး၊ အခုကြည့်လေ၊ အလုပ် ပြုတ်မသွားဘို့အတွက် ကိုယ်တို့ စုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ ရွှေကလေးတွေ ပြုတ်ကုန်သလောက် နီးနီးဖြစ်ခဲ့ရဘီ၊ ခဏကလေးနဲ့ကုန်သွားမှာဘဲ၊ ကိုယ်တော့ မင့်ရွှေတွေဘယ်လို ပြန်ရွေးနိုင်ရမလဲဆိုတာဘဲ စဉ်းစားနေတယ်၊ ဟေမန်မယ်ကိုယ်တို့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေရအောင် မင်းလုပ်ခဲ့တာ ကိုယ်မေ့နေလို့ ပြောတာမဟုတ်ဖူး ဝေ”
ရှေ့ဘက်လယ်ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီး၏ အဆုံး၌မြို့ ၏ဆင်ခြေဖုံးကို လှမ်မြင်နေရသည်။ ဝေ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် စပါးစက်၏ စက်ခေါင်းတိုင်သည် ဝင်လုလုဆည်းဆာ၏ တ်ိမ်တောင် တိမ်လိပ်များ အောက်ဖက်၌ မှုန်ရေးရေးထင်နေသည်။ စပါးစက်ထိပ်မှ ခုအခါ ရေခြောက်ခန်းနေတော့မည့် ချောင်းကလေး၊ ချောင်းကို ဖြတ်သားထားသည့် လက်ရန်းမဲ့ ခယိုခယိုင် တံတားကလေးကို သတိတရဖြစ်နေသည်။ ထိုလက်ရန်းမဲ့ တံတား ကလေးပေါ်မှ ဝေနှင့်ကျနော်တို့ ၏ ဇာတ်လမ်း အတိုအထွာ ကလေးများ၊ အလုပ်သမား တန်းလျား၊ စပါးသယ် အလုပ်သမ ကလေးများ။
ယခုကား ဝေအားကိုးသည့် ဝေ၏မိဖများသည် ထိုနေရာ၌ ရပ်တည်မနေနိုင်ကြတော့ပြီ။ သူတို့ သည် ပျံကျ ကျေးငှက်များကဲ့သို့ရေကြည်ရာမြက်နုရာသို့ ပျံသန်း သွားခဲ့ကြ ပြီးလေပြီ။ သူတို့ သည် လူမျိုးစုံပေါ်စ သမိုင်းဦး ခေတ်ကာလက အခြေအနေမဲ့ခြေသလုံးအိမ်တိုင် သမားများနှင့်ခြားနား လွန်းလှသည် မဟုတ်သေး။ သူတို့ ၏ အသိပညာများကား အခြေအနေ အရပ်ရပ်နှင့် ကင်းကွာနေခဲ့ပြီး နောက်သို့ နှစ်လှမ်းပြန်ဆုတ်၍ ကျန်နေရစ်ခဲ့ဆဲပင်။
လှည်းပေါ်တွင်ကျနော်က ဝေရယ်မောရန် ပြက်လုံး တခုကို ထုတ်ခဲ့သေးသည်။ သို့ သော် ကျနော့်ပြက်လုံးမှာ ဟာသရသ ခြောက်ခန်းနေပါသည်။ ကျနော့်ရယ်သံမှာလည်း ခြောက်သွေ့နေပါသည်။ မျက်နှာမှာလည်း ညှိုးငယ်နေပါသည်။
ဘူတာသို့ ရောက်ချိန်တွင် မှောင်ရီဆိုင်းနေပေပြီ။ ဘူတာနောက်ဖဘက် ကုန်ရုံတွင် တင်ဆောင်လာသည့် အိမ်ထောင် ပစ္စည်းများကို ချပေးခဲ့ပြီး ကိုမြလေးနှင့် သူ့အဖေါ်သည် နှုတ်ဆက်၍ လှည်းပြန်မောင်းသွားကြလေသည်။
သူ့တို ဒီနေ့ညတွင် မြို့ ၌ပင်အိပ်မည်ဖြစ်ပြီး နံနက် ဈေးတွင်မိုးတွင်းစာ ဆီ၊ ဆား၊ ငရုတ်၊ကြက်သွန်၊ ဆေးတို့ကိုဝယ်ပြီးမှ ပြန်သွားကြမည်။ သူတို့ ကို ကျနော်သည် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်၏။သို့ သော် ကျေးဇူးတင်စကားကို တလုံး တပါဒမျှထုတ်ဖော်၍မပြောမိ။ သူတို့ သည် ကျေးဇူးအတင် ခံလိုသောကြောင့် သို့ မဟုတ် တခုခုတစုံစုံ အရာရာကို အပြန်အလှန်သဘောဖြင့် လိုချင်သောကြောင့် လိုက်လံ ပို့သကြခြင်း မဟုတ်ပေ။ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဟု ပြောလိုက်လျှင် ထိုစကားဖြင့်ပင် သူတို့ ၏ စေတနာကို အလဲအလှယ်ပြု၍ စော်ကား လိုက်ခြင်း ဖြစ်နေတော့မည်။
“သွားမယ်ဗျို့ ၊ ခင်ဗျားတို့ ဟေမန်ကို မကြာမကြာလဲ လာလည်ကြအုံးဗျား ခင်ဝေဒို့ကို မေ့မသွားနဲ့ နော်၊ နောက်တခါအလုပ်ပြုတ်ရင် ဟေမန်ကိုလာခဲ့ကြအုံးဗျ၊ ကျနော်တော့ ခင်ဗျားနောက်တခါ အလုပ်ပြုတ်လာတော့မှဘဲ အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်၊ အဲဒီကျမှ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ဖြစ်မှာ၊ ခင်ဗျားက လူပျိုရံလုပ်ဗျာ၊ ခင်ဝေကအပျိုရံပေါ့လေ”
ကိုမြလေး၏ စကားကြောင့် ကျနော်သည် ရယ်ပစ်မိ၏။သူတို့လည်း ရယ်မောပြီး လှည်းများကို ပြန်မောင်း သွားကြသည်။
ကုန်ရုံတွင် တန်ဆာလုပ်ပြီး ဝေနှင့် ကျနော်သည် ဘူတာပလက်ဖောင်း၏ ဒေါင့်စွန်းထိုင်ခုံဘက်သို့လျှောက်သွားကြလေသည်။ သည်ဘူတာသို့ လူစီးရထားသည် ည ၇-နညရီ ၃၅-မိနစ်တွင် ဆိုက်ရောက်လိမ့်မည်။ ယခုပင် မီးရောင်ကင်းမဲ့သည့် နေရာများ၌ အမှောင်ရိပ်များ လွှမ်းနေလေပြီ။ ထိုင်ခုံပေါ်၌ ထိုင်နေရင်း ရထားဆိုက်ကပ်ရန် နီးကပ်လာချိန်အထိ ဝေနှင့် ကျနော်သည် စကားတလုံးမျှ မပြောမိကြပေ။ ထောင့်စွန်း ထိုင်ခုံပေါ်ဝယ် အမှောင်ရိပ်ဘက်သို့ လှည့်ထားသည့် ဝေ့မျက်နှာ ကလေးမှာ နွမ်းရော်နေမြဲပင်။ ထို့ နောက်ဝေ၏ သက်ပြင်းရှိုက်သံ၊ သက်မချသံများသည် ငိုရှိုက်သံ၊ ငိုကြွေးသံများကဲ့သို့ ထင်မှတ်နေရပြန်သည်။
သမီးလေးစပယ်ခိုင် အရွယ်ရောက်လာလျှင်၊ သူ့လိုမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကလေးနှင့် ရယ်လိုက်လျှင် သူ့လိုပင်ပါးခွက် ကလေးနှစ်ခု ချိုင့်ခွက်သွားလိမ့်မည်။ စကားပြောလိုက်လျှင်လည်း ဝေ့အသံအတိုင်း၊ ရယ်မောလိုက်သံ သည်လည်း ဝေအသံအတိုင်း၊ လှုပ်ရှားမှု ဟန်ပန်သည်လည်း ဝေနှင့်ခွဲခြား၍ ရမည် မဟုတ်။စိတ်ဓာတ်သည်လည်း ဝေ့လိုပင်နေမည်။ ထိုအချိန်၌ ကျနော့်စိတ်ထဲတွင် တခဏဝယ် ဝေ့ကိုပင် အရွယ်ရောက် နေသောသမီးလေး စပယ်ခိုင်ဟု ထင်နေပြန်လေသည်။ ထို့ ကြောင့် ဝေ့ အပေါ်၌ထားသော သံယောဇဉ်ကြိုးများမှာ ပိုမို၍ မြဲခိုင်လာနေသည်။ ဝေ့ကို ကိုယ့်သမီးလေးကိုယ်စား သံယောဇဉ် ထားရမည်ဟု တွေးတောနေမိပြန်သည်။
“ရထားဆိုက်ကပ်ရန် ငါးမိနစ်မျှသာ လိုပါတော့သည်”ဟုကြေညာသံသည် ပလက်ဖောင်းအပေါ်ဘူတာ အမိုးအောက်မှ ပေါ်လာလေသည်။.
မကြာမီ ၇- ၃၅ ရထားသည် ပလက်ဖောင်း ဘေးသို့ ခပ်နှေးနှေးဝင်လာပြီး မီးရောင်အောက်၌ ကိုယ်ရှိန်သတ် ရပ်တန့် လိုက်လေသည်။
ရထားပေါ်၌နေရာမရနိုင်တော့ပေ။ ကျနော်တို့ သည် အိမ်သာထောင့်လှေကားခုံ ၌ရပ်လိုက်ကြလေသည်။ ထို့ နောက် ၇-၃၅ ရထားသည် ချစ်သမီးလေး ကျန်နေရစ်ခဲ့ရာ ဟေမန်မြေမှ တစတစ ခွာလာတော့သည်။ ပလက်ဖောင်းမီးရောင်မှာ နောက်ဖက် ဝေးစွာ၌ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ ရပ်နေရာ အိမ်သာထောင့်မှာ မှောင်နေသည်။
ရထားသည် သံလမ်းပွိုင့်၊ အပြင်အလံတိုင်၊ ထို့ နောက်မြို့ ၏ ဆင်ခြေဖုံးကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့သည်။ အေးစက် နေသောဝေ့လက်သည် အမှောင်ထဲတွင် ကျနော့်လက်ကို တင်းရစ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားပြီး သူ့ကိုယ်လုံး ကျစ်ကျစ်ကလေးမှာ ကျနော့်ရင်ခွင်ကို အားကိုးကြီးစွာ မှီခိုထားနေသည်။
“ခင်ဝေတို့ တကယ်ဟေမန်က ထွက်လာကြတာနော်၊ ဟေမန်နဲ့ဝေးရပြီနော်၊ သမီးလေးနဲ့ ဝေးရပြီ၊ အခုတကယ်ဝေးကြပြီ၊ ကိုကို့သမီးလေးသေတာ တကယ်ဘဲနော်၊ သမီးလေး မြေပုံကို ခင်ဝေမကြည့်ခဲ့ရဘူး”
ထိုအခါတွင်ကား ဝေ့အသံမှာ ရင်ထဲမှ ဆို့တက်လာပြီး ငိုတော့မည့် အတိုင်း ဖြစ်နေသည်။ ထို့ နောက် ရထားသည်နှေးသွားပြီး ကြီးမားရှည်လျားသော တဆစ်ချိုး ကွေ့ကြီးအတိုင်း တောင်ခြေဘက်သို့ ဦးခေါင်းလှည့်ချိုး ကွေ့သွားနေလေပြီ။
အလားတူပင် ကိုယ်တို့ ဇာတ်လမ်းသည်လည်း တဆစ်ချိုးကွေ့ရတော့မည် ထင်သည်ဝေ…..။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 8:52 PM
မယ့်ကိုး November 8, 2009 at 1:42 AM
သတင်းကြီးလွန်းတဲ့ နွေတညကို ဘယ်လိုပင်ရှာဖွေပေမယ့် မဆုံဆည်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ မျှဝေပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။